Global Voices teny Malagasy · Febroary 2014
Mey 2022 30 Lahatsoratra
Tantara misongadina tamin'ny Febroary 2014
Tantara tamin'ny Febroary, 2014
Azia Atsinanana 28 Febroary 2014
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 28 Febroary 2014
Mediam-bahoaka 28 Febroary 2014
Azia Atsimo 28 Febroary 2014
Eny An'Habakabaka Ny Fitiavana
Nankalaza ny Andron'ny Mpifankatia ireo mpifankatia mihoa-pefy any Azia Afovoany na dia nisy aza ny fanakanana. Nameno ny toerana fijerena sarimihetsika tany Shanghai ireo tsy manan'olon-tiana mba hisomparana ireo mifamotoana ny 14 Febroary. Nizara ny sasany amin'ireo hiram-pitiavana ankafiziny ny ekipanay avy any Karaiba. Ary izahay ato amin'ny Global Voices...
Gregorio Jiménez de la Cruz , Mpanao Gazety Iray Maty Tany Meksika
Fasana nafenina no niafaran'ilay mpanao gazety Meksikana Gregorio Jiménez de la Cruz. Mbola tsy tonga any amin'ny fitsarana ireo namono azy.
Brezila : Lahatsary Mananihany Nosivanin'ny Rede Globo
Nahita fahombiazana be "Ilay lahatsary tsy tian'ny Globo ho hitanareo", izay anehoan'i Rafucko (breziliana mpanao gazety amin'ny endriny mananihany) amin'ny fomba mahatsikaiky ny heveriny ho fandrakofan'ny fantsom-pahitalavitra Rede Globo ireo hetsi-panoherana nampihovitrovitra an'i Brezila.